Brand New 0 Purogiramu iPhone 5C Li-ion Battery Replacement Manufacturer uye Supplier
Tsanangudzo:0 Purogiramu iPhone 5C Battery,iPhone 5C Li-Ion Battery,iPhone 5C Replacement Supplier,,,
New iPhone 5C Battery Kuchinja kwekare  Bata Ikozvino
Brandnew iPhone 5C Inotsiva Lithium-ion Battery  Bata Ikozvino
New iPhone 5C Battery Kuchinja kwekukwegura kwako iPhone 5C For iPhone 5C 1510mAh 4.3V 5.7whr IPhone yako 5C Battery inokurumidza kukurumidza here? Apple yakayemura Older iPhone mifananidzo inogona kuenderera mberi nokuda kwekukwegura mabheti. Kana...
Brandnew iPhone 5C Inoshandiswa Lithium-ion Battery neChina Mutengo For iPhone 5C 1510mAh 4.3V 5.7whr Wedzera iPhone yako 5C yeupenyu hwebheteri asi uchitsiva ne iPhone 5C Lithium-ion Battery. Yakagadzirwa kubva ku brandnew pure cobalt cell ne 0...
China iPhone 5C Battery Vatengi
Zvimwe zvikamu zve iPhone 5C Battery Pack , isu tiri vashandi vanobva kuChina, iPhone Li-ion Polymer Battery , iPhone Inoshandiswa Bhatiri vatengesi / factory, kutengesa zvinhu zvakanakisisa zvemiti ye iPhone Battery Pack R & D nekugadzira, tine yakakwana- basa rekutengesa uye rutsigiro rwekambani. Tarisira mberi kubatana kwako!
Unyanzvi: 1510mAh (5.73whr)
Usayizi wesero: 33x36x91mm
0 Purogiramu iPhone 5C Battery iPhone 5C Li-Ion Battery iPhone 5C Replacement Supplier